Qorshooyinka Casharka: Pornography Internet - Abaalmarinta Abaalmarinta
Bogga ugu weyn Qorshooyinka Casharka Bilaashka ah Qorshooyinka Casharka: Pornography Internet
Muuqaal gaar ah oo ka mid ah casharada Aasaaska Abaalmarinta ayaa diiradda saaraya shaqeynta maskaxda qaangaarka. Tani waxay ugu fiican ka caawineysaa ardayda inay fahmaan oo ay u dhisaan adkeysi waxyeelada ka imaan karta isticmaalka filimada. Abaalmarinta Abaalmarinta waxaa lagu aqoonsaday Kulliyadda Boqortooyada ee Dhakhaatiirta Guud ee London si ay u baraan aqoon isweydaarsiyo xirfadeed oo ku saabsan saameynta sawir-maskaxeed ee caafimaadka maskaxda iyo jirka.
Casharradeennu waxay u hoggaansamayaan Waaxdii ugu dambeysay ee Wasaaradda Waxbarashada (dowladda UK) “Xiriirka Waxbarashada, Xiriirka iyo Waxbarashada Jinsiga (RSE) iyo Caafimaadka Caafimaadka” hagitaan sharci ah.
Casharka 1: Pornography on Trial
Filimada qaawan ee internetka waxaa si aad ah u isticmaala dhalinyarada, qaasatan wiilasha, laakiin hada waxaa sii kordhaya gabdhaha.
Casharkaan ardayda dugsiga sare waxaan ugu galineynaa qaawan filimada. Waxaan weydiineynaa su'aasha ah, "Miyuu sawir-gacmeedku waxyeello leeyahay?" Waxaan bixinaa 8 qaybood oo cadeymo ah si aan uga caawino ardayda inay ka fikiraan arimaha, una dhaliilaan cadeynta sida xeerbeegtida, oo ay u qoraan xukunkooda oo ay ku jirto sababaynta. Waxay ka maqli doonaan dhakhtarka neerfaha, nin dhalinyaro ah iyo gabadh da 'yar oo ka soo kabanaya dadka balwada leh, cilmi nafsi ku shaqeeya mushaarka warshadaha galmada, soosaare' anshax ', iyo qeexida Ururka Caafimaadka Adduunka ee caafimaadka galmada.
Asal ahaan, Hay'adda Caafimaadka Adduunka ee Qoondaynta Cudurrada (ICD-11) waxay sheegaysaa in adeegsiga sawir-gacmeedka dhibaatada leh lagu ogaan karo inuu yahay cilad-xumo dabeecad galmo iyo cilad-qabatin. Isla mar ahaantaana, warshadaha qaawan, sida Warshadaha Tubaakada dhowr iyo toban sano ka hor oo leh sigaar cabista iyo kansarka sanbabada, waxay siinayaan xirfadlayaasha daryeelka caafimaadka inay diidaan inuu jiro xiriir ka dhexeeya isticmaalka sigaarka iyo dhibaatooyin caafimaad oo kala duwan. Waxay si ballaaran ugu shaqeeyaan baraha bulshada iyo guud ahaan internetka. Tani waxay keenaysaa jahwareer badan oo ku saabsan saameynta dhabta ah ee filimada qaawan ee internetka gaar ahaan dhalinyarada.
Casharka 2aad: Jacaylka, Filimada Qaawan & Xiriirka
Sidee qofku u aqoonsadaa astaamaha iyo dhinacyada togan ee xiriirka dhow ee qof-ilaa-qof ee dhow?
Saamayn intee le’eg ayay caado-qaadashada qaawan ku leedahay oggolaanshaha galmada, cadaadiska galmada, qasabka, kufsiga, faraxumeynta galmada iyo saaxiibtinimada? Waa maxay halista iyo abaalmarinta isticmaalka qaawan? Maxay yihiin calaamadaha iyo astaamaha isticmaalka badan?
Casharka wuxuu bixinayaa xeelado kala duwan oo ardayda looga caawinayo inay noqdaan wax kasta oo ay noqon karaan iyo inay yeeshaan xiriir caafimaad qaba oo horay u socda.
Casharka 3: Internet Pornography iyo Caafimaadka Maskaxda
Dhowrkii sano ee la soo dhaafay waxaa si xawli ah kor ugu kacay arrimaha caafimaadka dhimirka ee dhalinyarada. Isbeddelka joogtada ah ee ka dhashay faafitaanka cudurku wuxuu sii xumeeyey xaaladdan.
Casharka wuxuu eegayaa kalsoonida jirka iyo sida boggaga qaawan iyo warbaahinta bulshada ay u sababi karaan isbarbardhiga qallafsan kuwa kale ee qadka. Waxay sidoo kale eegaysaa sida shirkadaha internetka, gaar ahaan filimada qaawan iyo shirkadaha ciyaaraha, ay u bartilmaameedsadaan jilicsanaanta maskaxda qaangaarka si looga dhigo kuwa adeegsada caado. Ardaydu waxay ogaadaan in bogagga bilaashka ah aysan run ahaantii bilaash ahayn. Shirkadaha internetka ayaa balaayiin doolar / rodol ka sameeya dareenka isticmaalaha, iibinta xogtooda shaqsiyadeed iyo doorbidka ujeeddooyinka xayeysiinta, bogagga la soo dejiyey iyo iibinta alaabooyinka la xiriira.
Casharkaan waxaa loogu talagalay ardayda dhigata dugsiga sare laakiin waxaa laga yaabaa in loo habeeyo dugsiga hoose. Ujeeddadu waa in ardayda loo suuro geliyo inay gartaan waxa caadiga ah iyo waxa iyaga iyo dadka kaleba ku jira iyo markay arrimaha soo if baxaan, ogaadaan sida ugu dhaqsaha badan ee looga raadsado taageerada meelaha ku habboon.
Waxay bixisaa xeelado waxtar leh oo lagu yareynayo isticmaalka internetka iyo dhisidda adkeysiga.
Casharka 4-aad: Tijaabada Porn-ka Weyn
Casharkaan wuxuu cusbooneysiinayaa xaqiiqooyinka iyo tirakoobka hadallada aadka loo jecel yahay ee TEDx, Tijaabada Porn ee Weyn ee laga soo bilaabo 2012. Ilaa hadda hadalka wuxuu ka badnaa in ka badan 13.5 milyan oo aragtiyo waxaana loo turjumay 18 luqadood.
Waxay sharraxeysaa halista ka-badinta mukhaadaraadka internet-ka waqti ka dib, sida cillad ku timaadda jilicsanaanta galmada, iyo sababta ay qaan-gaarka u qaataan waqti dheer inay ka soo kabtaan caafimaadkooda galmada marka loo eego ragga da'da ah.
Casharka wuxuu bixiyaa war wanaagsan oo leh sheekooyin dhowr ah oo soo kabasho ah oo ay dareemayaan dhallinyarro dareemeysa caafimaad, firfircooni badan, ganacsato badan oo dadaal badan isla markaana ku guuleysanaya soo jiidashada lammaanaha markay joojiyaan galmada.
Waxaa jira waxyaabo badan oo caawimaad leh oo loogu talagalay in lagu wargeliyo ardayda haddii ay doonayaan macluumaad dheeraad ah.